बन्ला त सिद्धबाबा सडकमा सुरुङ ?::Independent News Portal from Nepal.
ओली–देउवा र प्रचण्डबीच भयो यस्तो सहमति
वर्षाका कारण सैनामैनाको मेला प्रभावित
बालुवाटारमा नेकपा र कांग्रेस नेतृत्वबीच छलफल
नारायणगढ मुग्लिन सडकखण्डमा पहिरो खसेपछि सडक एकतर्फी सञ्चालनमा
बुटवलमा प्रथम नगरस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता २०७६ शुरु
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं १५ का विपन्न परिवारलाई सिरक वितरण
लुम्बिनी र स्पेनको काथेरेस नगरबिच भगिनी सम्बन्ध बिस्तार
कफी सुपर जोन गुल्मीको उद्यमशिलता तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम प्युठानमा सम्पन्न
बुटवल । बुटवल–तानसेन सडकको सिद्धबाबामा साउन २७ गते ढुंगासहितको पहिरोले २ वटा गाडी च्याप्दा १ जनाको मृत्यु भयो भने ४ जना घाइते भए ।
ठूलासाना गरी दैनिक २ हजारको हाराहारीमा गाडी चल्ने यो बाटोमा सात वर्षको अवधिमा भएका ३८ दुर्घटनामा ३१ जनाको मृत्यु भयो भने १२ जना घाइते भए ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पाल्पाका अनुसार यो सडक खण्डको करीब ५ किलोमिटर दुरीमा वर्षेनी ३ देखि ४ जनाले ज्यान गुमाउँछन् ।
आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा ११ जना, २०७१/०७२ मा ५ जना, २०७२/०७३ मा ४ जना, ०७३/०७४ मा २ जना, २०७४/०७५ मा ४ जना, २०७५/०७६ मा ३ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक प्रहरीसँग छ ।
यस्तो डरलाग्दो तथ्यांक देखिने यो बाटो हिड्नुपरे यात्रुले पहराबाट ढुंगा खसेर च्याप्ने हो कि, ढुंगासहितको पहिरोले बगाउने हो भन्ने चिन्ता हुन्छ ।
अर्घाखाँची र गुल्मीको पूर्वीभेग, पाल्पा, स्याङ्जा, कास्की, वाग्लुङ, पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङलगायतका जिल्लामा जानेका लागि यो सडक डरको पोको हो ।
बन्ला त सुरुङमार्ग
२०१८ सालदेखि खन्न शुरु गरेर २०२८ सालदेखि गाडी चल्न थालेका हुन् बुटवल–पाल्पा सडकमा । सिद्धार्थ राजमार्गको यो खण्डको रुपन्देहीको बुटवल चिडियाखोलादेखि पाल्पाको झुम्सासम्मको करीब ५ किलोमिटर सडक खण्ड मृत्युमार्गका रुपमा बदनाम छ ।
सुरुङमार्गका लागि अध्ययन गरिँदै । तस्वीर : जनता टुडे
यो सडकमा सुरुङमार्ग बन्छ भनेर नेताहरु, सरकारी अधिकारीहरु चर्चा गर्छन् । सुरुङमार्गको बारेमा पनि आश्वासन सुनाउँछन् ।
यो कुहिरे भीरबाट खस्ने पहिरो रोक्न र सडक सुधार गर्न भन्दै एक वर्षमा ५० लाखभन्दा धेरै खर्च हुन्छ । रुपन्देही र पाल्पाका जनप्रतिनिधिहरु सडकको जोखिम हटाउनेबारे कैयौंपटक सार्वजनिक रुपमा बोल्छन् । सरकारले पनि सुरुङमार्ग बनाउने भन्दै अध्ययन गरेको ग¥यै छ । सुरुङमार्गको अध्ययनका लागि ५० लाख बजेट छुट्टाएर त्यसको अध्ययन पनि भएको छ ।
डिभिजन सडक कार्यालय पाल्पाका प्रमुख केदार नेपाल रकनेट प्रविधिभन्दा सुरुङमार्ग बढी उपयोगी र स्थायी विकल्प हुने भएकाले सुरुङमार्गकै लागि सरकारी योजना अघि बढ्न लागेको बताउँछन् ।
सडकको सबैभन्दा बढी जोखिम रहेको ३ किलोमिटर क्षेत्रमा करीब १ सय वटा सानाठूला पहिरो खस्छन् । भूगर्भविद् रञ्जन दाहाल पहाडको संरचना कमजोर भएका कारण पटक पटक पहिरो खस्ने गरेको बताउँछन् ।
चुरे पहाडको संरचना कमजोर भएकाले पहिरो खसिरहने उनको भनाई छ । कमजोर संरचना भएकाले पटक पटक खसिरहने पहिरो रोक्न जियोटेक सोलुसन्स इन्टरनेशनल प्रालिले रकनेट प्रविधिमार्फत पहिरो रोक्न परीक्षण गरेको थियो । जापान सरकारको सहयोगमा वीपी राजमार्गमा प्रयोग भएको प्रविधि यहाँ पनि उपयोगी हुने ठहरका साथ पहाडमा जाली लगाएर ढुंगालाई अड्याउने प्रयास भएको थियो ।
भूर्गविद् दाहाल भन्छन्–भोटेकोशी हाइड्रोपावरको पहाडमा पनि यो प्रविधि सफल भएको छ, यहाँ पनि यो प्रविधि उपयोगी हुन्छ ।’ ६० लाख खर्च गरेर गरिएको परीक्षण सफल भएपनि सरकारले यसमा चासो दिएन ।
रकनेट प्रविधिको परीक्षणपछि संघ सरकारले सुरुङमार्गको अध्ययन गरायो । स्वीटजरल्याण्ड सरकारको सहयोगमा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि तयार भएको छ । परामर्शदाता कम्पनी इटेगोले तयार पारेको डीपीआरका आधारमा सुरुङ बनाउने संघ सरकारको योजना छ ।
डीपीआरअनुसार सुरुङ बनाउन करीब ९ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । सिद्धबाबादेखि दोभानसम्म करीब सवा १ किलोमिटर दुरीको सुरुङ बन्नेछ ।
यो क्षेत्रमा बढी दुर्घटना भएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारले वैकल्पिक मार्ग बनाउन थालेका छन् । रुपन्देहीको चरङ्गेमुडाबास– चौकी भञ्ज्याङ–ज्यामिरे–झुम्सा सडक सिद्धबाबाको विकल्पको रुपमा अगाडि बढेको छ ।
पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाले आसपासका अरु नगरपालिका र गाउँपालिकासँग मिलेर गत वर्ष करीब ९० लाख खर्चेर वैकल्पिक सडकको ट्याक खोलेको छ । १६ किलोमिटर लामो यो सडकको पाल्पाको झुम्सादेखि चौकी भञ्ज्याङसम्म गाडी चल्छन् । रुपन्देहीको चौकी भञ्ज्याङदेखि मुडाबाससम्मको सडक विस्तार हुनसकेको छैन । यो सडकका लागि प्रदेश सरकारले १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
यो वैकल्पिक भनिएको सडक पनि त्यति सुरक्षित छैन । त्यसैले सिद्धबाबा क्षेत्रको सुरक्षित यात्राका लागि बन्ला त सुरुङ ? यो आम यात्रुको प्रश्न हो ।
सिद्धबाबामा पहिरोमा पुरिए जीप, १ जनाको मृत्यु
प्रकाशित मिति : सोमवार, भदौ ३०, २०७६ , ६:०५ बजे
बिभिन्न जिल्लाको भ्रमणमा निस्किएका पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह कपिलवस्तुमा
राष्ट्रपति भण्डारीबाट बडिगाड दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त
अवैध शुल्क फिर्ता नगर्ने मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई भोलीदेखि पक्राउ गर्ने निर्णय
सूचना आयोगका संस्थापक अध्यक्ष कसजूको निधन